fmradiobroadcast.com တွင် 20KW FM Low Pass Filter ကို ရောင်းချရန်
ရောင်းရန် 20kW Low Pass Filter ရေဒီယိုစခန်းအတွက် Low Pass Filter ကိုဝယ်ပါ။
FMUSER 20KW FM Low Pass Filter အကြောင်း
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ ရေဒီယိုစခန်းအတွက် Low Pass Filter
FMUSER သည် ဦးဆောင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ရေဒီယို စတူဒီယို ပစ္စည်း ပေးသွင်းသူများ ရာစုတစ်ဝက်နီးပါး။ 2008 ခုနှစ်မှစတင်၍ FMUSER သည် ကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာ developer များနှင့် စေ့စပ်သေချာစွာ ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ဝန်ထမ်းများအကြား တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ စစ်မှန်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုမှတစ်ဆင့် FMUSER သည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအရှိဆုံး အီလက်ထရွန်နစ် စည်းဝေးပွဲအချို့ကို ယမန်နေ့က စမ်းသပ်ထားသော အခြေခံမူများကို အသုံးပြုကာ ယနေ့ခေတ်၏ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံပညာကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်ယူဆုံးသော အောင်မြင်မှုများထဲမှ တစ်ခုအပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များစွာ၏ ရေပန်းစားသော ရွေးချယ်မှုမှာ ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်သည်။ RF low pass filter ရေဒီယိုစခန်းအတွက်။
"အကယ်၍ သင်သည် ရောင်းချရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာန စက်ကိရိယာများကို ရှာဖွေနေပါက၊ FMUSER မှ အကောင်းဆုံး အသံလွှင့်စတူဒီယို စက်ပစ္စည်းများကို အဘယ်ကြောင့် မရွေးချယ်ရသနည်း။ ၎င်းတို့သည် radiofrequency filter များအားလုံးကို အကျုံးဝင်သည်၊ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ FM low pass filter များ၊ ရောင်းရန် HPF အများအပြား၊ BPF for sale၊ BSF for sale နှင့် low pass cavity filter များ sale ဖြစ်သည့် 88-108Mhz low pass filter များရောင်းရန်ရှိသည်။ UHF bandpass filter နှင့် VHF bandpass filter ကဲ့သို့သော UHF နှင့် VHF filter များဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့တွင် အရည်အသွေးမြင့် ရေဒီယိုစတူဒီယိုပစ္စည်းများကိုလည်း ရောင်းချပေးပါသည်။"
နောက်အပိုင်းကတော့ အဘယ်ကြောင့် RF Low Power Filters များ လိုအပ်သနည်း။ | ကြိုးခုန်
Low Pass Filter ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
Low Pass RF Filters များကို အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သနည်း။
စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော Harmonic နှင့် Spurious Emissions များ မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း။
ရောင်းရန်အကောင်းဆုံး RF Low Pass Filter
ရေဒီယိုစခန်းအတွက် အကောင်းဆုံး FM Harmonics Filter ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
RF Filters များအကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များ
FMUSER 20kW FM Low Pass Filter တွင် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်သည်-
ကုန်ကျစရိတ်သက်သက်သာသာဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယို turnkey ဖြေရှင်းချက်များကို လိုအပ်သော ရေဒီယိုလိုင်းအော်ပရေတာများ
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစက်ရုံ၊ FMUSER ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အသံလွှင့်စက်များ ရောင်းချခြင်း၊ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ဖောက်သည် အမျိုးမျိုးတို့ကို အောင်မြင်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပါသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်လွှင့်မှုဖြေရှင်းချက် 10 နှစ်ကျော်ကြာအောင် သေချာတာတစ်ခုက တစ်ခုပါပဲ။ မြင့်မားသောပါဝါ lowpass filter 2nd နှင့် 3rd harmonics filtering ကို FM radio transmitter များစွာမှ ကြိုးမဲ့ ရေဒီယို အချက်ပြမှုများကို ပေါင်းစပ်ကာ ခွဲထုတ်ရန် အများအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
"FMUSER သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံး ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ တင်သွင်းသူဟု မပြောနိုင်သော်လည်း အချို့သော ရေဒီယိုအော်ပရေတာများအတွက်၊ FMUSER သည် အမှန်တကယ်ပင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပေးသွင်းသူနှင့် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုဌာန ကိရိယာ။"
- - - - - FMUSER ၏သစ္စာရှိအဖွဲ့ဝင်ပီတာ
▲ အကောင်းဆုံး FM Low Pass Filter ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ ▲
ရေဒီယိုစခန်းအတွက် အဘယ်ကြောင့် RF Low Power Filters များ လိုအပ်သနည်း။
ယခင်အပိုင်းကတော့ အကောင်းဆုံး FM Low Pass Filter ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ | ကြိုးခုန်
နောက်အပိုင်းကတော့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော Harmonic နှင့် Spurious Emissions များ မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း။ | ကြိုးခုန်
ရေဒီယိုစက်ကိရိယာ၏ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
ဤသည်မှာ ရေဒီယိုအသံလွှင့်လုပ်ငန်းအတွက် အဘယ်ကြောင့် RF low pass filter များ လိုအပ်သည့် အကြောင်းရင်းအနည်းငယ်ရှိပါသည်။
Harmonics နှင့် spurious emission များကို ရှောင်လွှဲ၍မရပါ၊ ၎င်းတို့သည် မတူညီသော ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်များတွင် ရေဒီယိုလိုင်းများကို ထိခိုက်စေပြီး ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ၏ အရည်အသွေးကို လျှော့ချကာ ၎င်းသည် ရေဒီယိုလိုင်းသို့ coaxial low pass filter ၏ အဓိကတန်ဖိုးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် RF low pass filter ကို အသုံးမပြုပါက၊ ဥပမာ၊ သင်၏ FM မှ ထုတ်ပေးသော မလိုလားအပ်သော ဟာမိုနီများနှင့် ပြင်းထန်သော ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု အများအပြားကို ဖန်တီးခြင်းအတွက် ဒေသတွင်း ရေဒီယို စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန ( FCC ကဲ့သို့) မှ အပြစ်ပေးခံရဖွယ်ရှိသည်။ တီဗီထုတ်လွှင့်မှု
ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်များသည် အခြားသော ဆက်သွယ်မှုများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် ဟာမိုနီထုတ်လွှတ်မှုများကို ကာကွယ်ရန် မြင့်မားသော ပါဝါကြိမ်နှုန်းနိမ့် pass filter များကို အသုံးပြုပါသည်။
FM station transmitter ဟာမိုနီများကို ဖိနှိပ်ရန်- FM transmitter များသည် များသောအားဖြင့် harmonics များထုတ်လုပ်သည် - transmitter frequency ၏ အဆများစွာ။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် VHF-tv နှင့် UHF-tv ဧည့်ခံမှုနှင့် paging နှင့် cellular radio reception ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ဤစီးရီးတွင် ပါဝါနိမ့်သော ဖီလ်တာများသည် ဆုံးရှုံးမှုနည်းသော FM လှိုင်းနှုန်းတစ်ခုလုံးကို ဖြတ်သန်းကာ ဟာမိုနီကို ဖိနှိပ်မှုများစွာကို ပေးစွမ်းသည်။
FMUSER အသံလွှင့်မှ RF Harmonics Filter ကိုဝယ်ပါ။
အကြီးမြတ်ဆုံးတန်ဖိုး RF Harmonics စစ်ထုတ်မှု ရေဒီယိုဌာနများကို အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော အချက်ပြမှုများကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံကြီးများအတွက်၊ ဒေသန္တရရေဒီယိုစီမံခန့်ခွဲမှုမှ အပြစ်ပေးခံရခြင်းမရှိဘဲ ပရိသတ်အား အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရှိသော ရေဒီယိုအစီအစဉ်များကို မည်သို့ပံ့ပိုးပေးရမည်မှာ ရေဒီယိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ၏ အမှတ်တံဆိပ်ကို သိရှိနားလည်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက် လိုအပ်သောအချက်ဖြစ်သည်။
FMUSER ကမ်းလှမ်းချက် ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်မှုများ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် 20kW FM low pass filter transmitter ပါဝါအဆင့် 20 kW အထိ။ တစ်မူထူးခြားသော ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် ဒုတိယ မှ ဒသမ ဟာမိုနီနှင့် ကျော်လွန်သည့် 45 dB သို့မဟုတ် ပိုကြီးသော ငြင်းပယ်မှုကို ပေးသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန် FM ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်မှုများထက် အရှည် 30% မှ 50% ပိုတိုသော စစ်ထုတ်မှုများကို ထုတ်ပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရောင်းချရန်အကောင်းဆုံး RF filter များရှိသည်။ RF filter များဝယ်ပါ။ FMUSER မှ 500W မှ 1000W အထိပါဝါရှိသည်။ အတိအကျပြောရရင် သူတို့က 20kW FM low pass filter ရောင်းရန်ရှိသည်။ (LPF) နှင့် 10kW VHF low pass filters ရောင်းရန်ရှိသည်။ (LPF)၊ 10kW VHF bandstop filter ကိုရောင်းရန်ရှိသည်။ (BSF)၊ 350W UHF ဒစ်ဂျစ်တယ် bandpass filter ကိုရောင်းရန်ရှိသည်။နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန ကိရိယာများထဲမှ တစ်ခု - FM bandpass စစ်ထုတ်မှုများကို ရောင်းချရန်။
ဆက်လက်ရှာဖွေနေပါက ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင်လိုအပ်သမျှကို သင်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ FM bandpass စစ်ထုတ်မှုများ အထူးသဖြင့် 500W မှ 1kW မှ 500W ၊ 1500W ၊ 3000W ၊ 5000W ၊ 10000W ၊ FM bandpass စစ်ထုတ်မှုများ FM ရေဒီယိုလိုင်းများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းအား ဟာမိုနီစစ်ထုတ်ခြင်းများအတွက် ရနိုင်သည်၊ ၎င်းတို့အားလုံးကို ဘတ်ဂျက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အံ့သြဖွယ်အရည်အသွေးဖြင့် ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား တောင်းခံပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် နားများဖြစ်ပါသည်။
FM/TV ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ၏ အရေးအပါဆုံး ရုပ်သံလွှင့်စည်းဝေးပွဲများထဲမှ တစ်ခုအနေဖြင့်၊ RF အပေါက်အတွင်း စစ်ထုတ်မှု FM / UHF / VHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုထုတ်လွှင့်စက်၊ ထုတ်လွှင့်အင်တင်နာနှင့် အခြားအလားတူ အသံလွှင့်ဌာနကိရိယာများကဲ့သို့ လိုအပ်ပါသည်။ RF passive ထုတ်ကုန်များ၏ ပင်မထုတ်ကုန်အဖြစ်၊ filter များသည် repeaters နှင့် base stations များရှိ အခြားသော passive assemblies များထက် အမှန်တကယ် ပိုအရေးကြီးသည်ဟု ဆိုရန် ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
သို့တိုင်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ RF filter သည် low pass RF filter သည် transmitter မှထုတ်ပေးသောသဟဇာတများကိုဖိနှိပ်ရန် ရုပ်သံလွှင့်ဌာန၏ ထုတ်လွှင့်သည့်ဘက်ခြမ်းရှိ လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ RF စနစ် အော်ပရေတာများသည် မတူညီသော ကြိမ်နှုန်းများကို အသုံးပြုသောကြောင့် လေထဲတွင် ဝှေ့ယမ်းနေသော ရှုတ်ထွေးသော အချက်ပြမှုများ အများအပြားရှိပြီး အချို့မှာ ရုပ်မြင်သံကြား၊ စစ်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီး အချို့မှာ ရာသီဥတု သုတေသနနှင့် အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဖြစ်သည်။
▲ ရေဒီယိုစခန်းအတွက် အဘယ်ကြောင့် RF Filters လိုအပ်သနည်း။ ▲
ယခင်အပိုင်းကတော့ Low Pass RF Filters များကို အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သနည်း။ | ကြိုးခုန်
နောက်အပိုင်းကတော့ ရောင်းရန်အကောင်းဆုံး RF Harmonics Filter | ကြိုးခုန်
RF အင်ဂျင်နီယာများအားလုံးအတွက် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အချက်မှာ သဟဇာတဖြစ်ပြီး spurious emissions များကို ရှောင်လွှဲ၍မရပါ။ အသံလွှင့်ဌာန အော်ပရေတာများအတွက်၊ သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် ဆူညံထုတ်လွှတ်မှုတို့သည် အဘယ်နည်း၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို မည်သို့ထုတ်လုပ်ပြီး ၎င်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျှော့ချမည်ကို နားလည်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ FMUSER ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် RF နည်းပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့မှ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအစီအစဉ်များ၏ အရည်အသွေးကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်လည်း အကျိုးရှိစေပါသည်။
ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများသည် အဘယ်ကြောင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် RF စစ်ထုတ်မှုများ လိုအပ်ကြောင်း ထပ်မံနားလည်လိုပါက အောက်ပါအကြောင်းအရာများ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
input frequency ၏ အတိအကျ multiple multiple တွင် ဖြစ်ပေါ်သော ကြိမ်နှုန်းများကို harmonics ဟုခေါ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ဟာမိုနီများသည် မလိုလားအပ်သော ဂီယာများဖြစ်ပြီး၊ မျှော်မှန်းထားသော ဂီယာကြိမ်နှုန်း၏ များပြားမှုဖြစ်သည်။ ဤမလိုလားအပ်သော ဂီယာသည် လိုချင်သော ဂီယာထက် ပါဝါအဆင့်နိမ့်သောနေရာတွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော စက်ကိရိယာများ ရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်များဖြစ်သည်။ 1kW သို့မဟုတ် 10kW transmitter ကို အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ transmitter ၏ အခြေခံ RF အစိတ်အပိုင်းကို band-pass filter ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော်လည်း RF transmitter တိုင်းနီးပါးသည် harmonics အချို့ကို ထုတ်လုပ်ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း professional wireless transmitter အများစုသည် ရှုပ်ပွခြင်းနှင့် လမ်းလွဲခြင်းကို ရှောင်လွှဲ၍မရပါ။ ထုတ်လွှတ်မှု
Harmonics သည် RF နှောင့်ယှက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ်လည်း ယူဆပါသည်။ စတုရန်းလှိုင်းများ၊ sawtooth waves၊s နှင့် triangular waves ကဲ့သို့သော အချို့သောလှိုင်းပုံစံများသည် harmonic frequency တွင် စွမ်းအင်များစွာပါရှိသည်။
Spurious Emission ကို ဘယ်လို ထုတ်ပေးသလဲ။
ဟာမိုနီများနှင့်မတူဘဲ input frequency နှစ်ဆတိုးလာသောအခါတွင် spurious emission မဖြစ်ပေါ်ပါ။ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖြန့်တာမဟုတ်ဘူး။ Spurious emission သည် splash ဟုခေါ်သော မတော်တဆထုတ်လွှတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကြားဖြတ်စနစ်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၊ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဟာမိုနီများ၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။
▲ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော Harmonic နှင့် Spurious Emissions များ မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း။ ▲
ရောင်းရန်အကောင်းဆုံး RF Low Power Filter
ယခင်အပိုင်းကတော့ Harmonics နှင့် Spurious Emissions များ မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း။ | ကြိုးခုန်
နောက်အပိုင်းကတော့ အကောင်းဆုံး FM Harmonics Filter ကိုရွေးချယ်နည်း | ကြိုးခုန်
သင်သည် ဤ Low Pass RF Filter ကို ယခင်ကထက်ပို၍ လိုအပ်ပါသည်။
ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်တွေ သုံးတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပါတယ်။ low pass RF စစ်ထုတ်မှုများ အခြားဆက်သွယ်ရေးများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သော ဟာမိုနီများနှင့် ဆူးထုတ်လွှတ်မှုများအား တားဆီးရန်၊ FM အသံလွှင့်စက်အများစုသည် အခြေခံကြိမ်နှုန်း၏ ဆယ်ဂဏန်းအထိပင် ဟာမိုနီများကို ထုတ်ပေးပါသည်။
ကံကောင်းစွာဖြင့်၊ FMUSER 20kW FM low pass filter FM ထုတ်လွှင့်သည့် လှိုင်းနှုန်းစဉ်အတွက် အကောင်းဆုံး RF စနစ် စစ်ထုတ်ခြင်း စည်းဝေးပွဲများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟာမိုနီများနှင့် အဆီထုတ်လွှတ်မှုတို့မှ သက်ရောက်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရာတွင် ကူညီရန်အတွက် FMUSER မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်ယူဖွယ် ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်မှုများထဲမှ တစ်ခုကို တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။ ၁၁ ကီလိုဝပ် FM ရေဒီယိုလိုင်းအတွက် RF low pass filter
Low Pass RF Filter သည် အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးအတွက်သာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
မလိုလားအပ်သော ဟာမိုနီများသည် သင့်နှင့်မသက်ဆိုင်သော လှိုင်းနှုန်းစဉ်အတွင်း မကျရောက်စေဘဲ ပြင်းထန်စွာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း (ဒုက္ခပေးသော တိုင်ကြားစာများစွာကို သင်လက်ခံရရှိနိုင်ပြီး အချို့သော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအေဂျင်စီများက အပြစ်ပေးခံရနိုင်သည်) ဥပမာ၊ တီဗီချန်နယ်များ၏ ကြိမ်နှုန်းများ သို့မဟုတ်၊ အခြားရေဒီယိုစခန်းများ။ FMUSER ကိုအသုံးပြုခြင်း။ 20kW RF low pass filter စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော သဟဇာတများနှင့် ဒုက္ခပေးသော တိုင်ကြားစာများတို့မှ လွတ်မြောက်ရန် သင့်အား ကူညီရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ထူးထူးခြားခြား Harmonics စစ်ထုတ်နိုင်စွမ်း
ဤအရာ၏အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ် high power low pass filter ယင်း၏ဖြစ်ပါသည် harmonic attenuation စွမ်းရည် - FMUSER ၏ စမ်းသပ်မှုအဖွဲ့၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသော စစ်ဆေးမှုဒေတာအရ၊ ဤအရာ၏ ဒုတိယ ဟာမိုနစ်လျှော့ကျမှုနှင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ဟာမိုနစ်လျော့ချခြင်း 20kW low pass RF စစ်ထုတ်ကိရိယာ ≥ 35 dB နှင့် ≥ 60 dB အသီးသီးသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် အတော်လေး အားကောင်းသော ဟာမိုနီများ စစ်ထုတ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ထည့်သွင်းဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးသည်။ FMUSER ၏ 20kW FM low pass filter 20000 watts အထိ ပါဝါအဆင့်အတွက် သင့်လျော်စေသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော RF စစ်ထုတ်မှုဖြင့် သင်သည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနရှိ မတူညီသော ပါဝါအမျိုးမျိုးဖြင့် ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်များကို ပေါင်းစပ်နိုင်ကာ ပရိသတ်များသည် ရေဒီယိုအစီအစဉ်များကို ရယူနိုင်သည်။ အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးနှင့် သိသိသာသာနိမ့်သော ဟာမိုနီများ။ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ:31 / 8 "အမြင့်ဆုံးထည့်သွင်းပါဝါ 20kw
20kW Low Pass filter များကို လွယ်ကူသောချိတ်ဆက်မှုစနစ်ဖြင့် built-in ဖြင့်ရောင်းချရန်အတွက် FM Radio Station အတွက် အထူးတည်ဆောက်ထားပါသည်။ ဆင်ခြင်ခြင်း။ အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံFilter စနစ်သည် FM transmitter များအတွင်းသို့ လွယ်ကူစွာ ပေါင်းစည်းနိုင်စေပါသည်။
FMUSER ၏ ပြီးပြည့်စုံသော စာကြောင်းကို ပေးသည်။ FM နှင့် UHF/VHF စစ်ထုတ်မှုများ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများတွင် သဟဇာတဖြစ်မှုကို နှိမ်နင်းရန်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ပြောရလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ရေဒီယိုအော်ပရေတာများကို နီးကပ်စွာနေရာယူထားသော FM အသံလွှင့်စက်များကို သီးခြားခွဲထုတ်ရန် ကူညီလိုပါသည်၊ ၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည် မဟာအင်တင်နာတစ်ခုတွင် FM ကြိမ်နှုန်းများစွာကို ပေါင်းစည်းရန် စိတ်ဝင်စားမှုပြသသည်ကို သတိပြုမိကြပြီး အချို့မှာ စိတ်ကြိုက်အက်ပ်လီကေးရှင်းများ ရှိလိုကြသည်။ ၎င်းတို့၏ ဘူတာရုံများရှိ အသံလွှင့်စက်များစွာအတွက်။ 20kW FM low pass filterဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းရဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ FM ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်မှုများ FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်များ 20kW အထိ ပါဝါ ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသော ဤအကောင်ကြီးကို အချို့သော FM ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာနများတွင် သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လိုအပ်ချက်များကို အမြဲနားထောင်နေပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်တန်းရောင်းအားကို စိတ်ဝင်စားပါက၊ RF ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်မှုများ။
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငါတို့က အကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဧရိယာအပြင်၊ 20kW low pass RF စစ်ထုတ်ကိရိယာတခြားသူနဲ့လည်း တွေ့နိုင်တယ်။ အရောင်းရဆုံး RF စစ်ထုတ်မှုများ အောက်ပါအကြောင်းအရာတွင်။ အရည်အသွေးကောင်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်လည်း အမြဲလိုလိုပါပဲ။
ဇယားကွက် A. FM/VHF LPF Low Pass Filter ကို ရောင်းချရန်
နောက်တစ်ခုက 10kW VHF Bandreject Filter VHF BSF Bandstop Filter fသို့မဟုတ်ရောင်း | ကြိုးခုန်
အမြိုးခှဲခွားခွငျး ပုံစံ မက်စ်။ input ပါဝါ VSWR
FM A ၁၀.၅၂ kW
VHF B ၁၀.၅၂ kW
ဇယား B 10kW VHF BSF Bandstop Bandreject Filter ကို ရောင်းချရန်
ယခင် ဟူသည် FM/VHF LPF Low Pass Filter ရောင်းရန်ရှိသည်။ | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက 350W UHF DTV BPF Bandpass Filter ရောင်းရန်ရှိသည်။ | ကြိုးခုန်
အမြိုးခှဲခွားခွငျး ပုံစံ မက်စ်။ input ပါဝါ VSWR fv f0±4MHz
VHF A ၁၀.၅၂ kW ≤ 1.1
3 1 / 8 " နောက်ထပ်
ဇယား C. 350W UHF DTV BPF Bandpass Filter ရောင်းရန်
ယခင် ဟူသည် 10kW VHF BSF Bandstop Bandreject Filter ကို ရောင်းချရန် | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက FM BPF Bandpass Filter ရောင်းရန် | ကြိုးခုန်
အမြိုးခှဲခွားခွငျး ပုံစံ မက်စ်။ input ပါဝါ ဂလိုင် VSWR insertion ဆုံးရှုံးမှု f0
Chart D. FM BPF Bandpass Filter ကို ရောင်းချရန်
ယခင် ဟူသည် 350W UHF DTV BPF Bandpass Filter ရောင်းရန်ရှိသည်။ | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက VHF BPF Bandpass Filter ရောင်းရန်ရှိသည်။ | ကြိုးခုန်
အမြိုးခှဲခွားခွငျး ပုံစံ မက်စ်။ input ပါဝါ ဂလိုင် VSWR
ဇယား E. VHF BPF Bandpass Filter ရောင်းရန်
ယခင် ဟူသည် FM BPF Bandpass Filter ရောင်းရန် | ကြိုးခုန်
နောက်သို့ FM/VHF LPF Low Pass Filter ရောင်းရန်ရှိသည်။ | ကြိုးခုန်
VHF A 500W
VHF A1 500W
d 0.80 dB
d 1.00 dB
Radio Station အတွက် RF Harmonics Filter ကို ဝယ်မလား။ ဤနေရာသည် မှန်ကန်သောနေရာဖြစ်သည်။
FMUSER သည် ထုတ်လုပ်သည့် အကောင်းဆုံး RF filter ထုတ်လုပ်သူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Harmonics Filter ရောင်းရန်ရှိသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ နိုင်ငံများနှင့် ဒေသပေါင်း 200+ အနီးတွင်၊ ဤသည်မှာ သင်ကိုးကားနိုင်သည့် အကြံပြုထားသော နိုင်ငံများဖြစ်သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ အန်ဒိုရာ၊ အန်ဂိုလာ၊ အန်တီဂွာနှင့် ဘာဘူဒါ၊ အာဂျင်တီးနား၊ အာမေးနီးယား၊ ဩစတေးလျ၊ သြစတြီးယား၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဘဟားမား၊ ဘာရိန်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘာဘေးဒိုးစ်၊ ဘီလာရုစ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်၊ ဘီလီဇ်၊ ဘီနင်၊ ဘူတန်၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ဘရူနိုင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဘာကီနာဖာဆို၊ ဘူရွန်ဒီ၊ ကာဘိုဗာဒီ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ကင်မရွန်း၊ ကနေဒါ၊ ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ၊ ချဒ်၊ ချီလီ၊ တရုတ်၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကိုမိုရော့စ်၊ ကွန်ဂို၊ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွန်ဂို၊ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကော်စတာရီကာ ၊ Côte d'Ivoire၊ Croatia၊ Cuba၊ Cyprus၊ Czech Republic၊ Denmark၊ Djibouti၊ Dominica၊ Dominican Republic၊ East Timor (Timor-Leste)၊ Ecuador၊ Egypt၊ El Salvador၊ Equatorial Guinea၊ Eritrea၊ Estonia၊ Eswatini၊ Ethiopia၊ ဖီဂျီ၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂါဘွန်၊ ဂမ်ဘီယာ၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ ဂျာမနီ၊ ဂါနာ၊ ဂရိ၊ Grenada၊ Guatemala၊ Guinea၊ Guinea-Bissau၊ Guyana၊ ဟေတီ၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်၊ ဟန်ဂေရီ၊ အိုက်စလန်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အီရန်၊ အီရတ်၊ အိုင်ယာလန်၊ အစ္စရေး အီတလီ၊ ဂျမေကာ၊ ဂျပန်၊ ဂျော်ဒန်၊ ကာဇက်စတန်၊ ကင်ညာ၊ ကီရီဘာတီ၊ ကိုရီးယား၊ မြောက်၊ ကိုရီးယား၊ တောင်၊ ကိုဆိုဗို၊ ကူဝိတ်၊ကာဂျစ္စတန်၊ လာအို၊ LATVia၊ လက်ဘနွန်၊ လီဆိုသို၊ လိုက်ဘေးရီးယား၊ လစ်ဗျား၊ လစ်ချ်တင်စတိန်း၊ လစ်သူယေးနီးယား၊ လူဇင်ဘတ်၊ မဒါဂတ်စကာ၊ မော်လဝီ၊ မလေးရှား၊ မော်လ်ဒိုက်၊ မာလီ၊ မော်လ်တာ၊ မာရှယ်ကျွန်းများ၊ မောရီတေးနီးယား၊ မောရစ်ရှပ်၊ မက္ကဆီကို၊ မိုက်ခရိုနီးရှား၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၊ မွန်ဆာကိုဗာ၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ မွန်တီနီဂရိုး၊ မော်ရိုကို၊ မိုဇမ်ဘစ်၊ မြန်မာ (မြန်မာ)၊ နမီးဘီးယား၊ နောရူ၊ နီပေါ၊ နယ်သာလန်၊ နယူးဇီလန်၊ နီကာရာဂွာ၊ နိုင်ဂျာ၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ မြောက်မက်စီဒိုးနီးယား၊ နော်ဝေး၊ အိုမန်၊ ပါကစ္စတန်၊ ပါလူ၊ ပနားမား၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီ၊ ပါရာဂွေး၊ ပီရူး၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ကာတာ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ရုရှား၊ ရဝမ်ဒါ၊ Saint Kitts and Nevis၊ Saint Lucia၊ Saint Vincent and the Grenadines၊ Samoa၊ San Marino၊ Sao Tome and Principe၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ဆီနီဂေါ၊ ဆားဘီးယား၊ Seychelles၊ Sierra လီယွန်၊ စင်ကာပူ၊ စလိုဗက်ကီးယား၊ စလိုဗေးနီးယား၊ ဆိုလမွန်ကျွန်းစု၊ ဆိုမာလီယာ၊ တောင်အာဖရိက၊ စပိန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဆူဒန်၊ ဆူဒန်၊ တောင်၊ ဆူရီနမ်၊ ဆွီဒင်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဆီးရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ ထိုင်း၊ တိုဂို၊ တွန်ဂါ၊ ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို တူနီးရှား၊ တူရကီ၊ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်၊ တူဗာလူ၊ ယူဂန်ဒါ၊ ယူကရိန်း၊ အာရပ်အီး Mirates၊ United Kingdom၊ United States၊ Uruguay၊ Uzbekistan၊ Vanuatu၊ Vatican City၊ Venezuela၊ Vietnam၊ Yemen၊ Zambia၊ Zimbabwe
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လိုအပ်ချက်များအတွက် အမြဲရှိနေပါသည်။
မင်းအကြောင်းတွေးနေတုန်းလား။ RF ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်မှု စျေးနှုန်း? ကျွန်ုပ်တို့သည် တတ်နိုင်သော ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများအတွက် ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်မှုများကနေ LPF low pass filters များ သို့ bandstop စစ်ထုတ်မှုများ နှင့် FM/UHF/VHF bandpass စစ်ထုတ်မှုများ၊ စသည်တို့ကို
ဘယ်ဘက်ရှိ "ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ" စာရွက်တွင် ဖြည့်သွင်းပါ။ သင့်လိုအပ်သော သတ်မှတ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရှိ အရောင်းသမားတစ်ဦးသည် ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပြီး ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးပါမည်။ FM/TV ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်မှု အထူးသဖြင့် သင့်လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အရောင်းအ၀ယ်နည်းပါးသော pass filter၊ bandpass filter စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသော filter turnkey ဖြေရှင်းချက်စသည်တို့ကဲ့သို့သော မေးခွန်းများအတွက်၊ ကောင်းပြီ၊ ပုံမှန်မေးခွန်းများဖြစ်သည့် ဈေးနှုန်း၊ ပေးပို့ချိန် သို့မဟုတ် specs များကိုလည်း အခမဲ့မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်တာကို ပြောပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြဲနားထောင်နေပါသည်။
▲ ရောင်းရန်အကောင်းဆုံး RF Harmonics Filter ▲
ယခင်အပိုင်းကတော့ ရောင်းရန်အကောင်းဆုံး RF Harmonics Filter | ကြိုးခုန်
နောက်အပိုင်းကတော့ RF Filters များအကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်အလက်များနှင့် အမေးအဖြေများ | ကြိုးခုန်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အချို့သည် မှန်ကန်သောအမျိုးအစားကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကို ကျွန်ုပ်မသိပါ ၊ RF ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်မှုဒါမှမဟုတ် နှစ်မျိုးလိုချင်တယ်။ ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်မှုများ ဒါပေမယ့် ဝယ်ဖို့ 50K$ ပဲရှိတယ်။
နှံ့နှံ့စပ်စပ် မားကတ်တင်း သုတေသန၏ အဆိုအရ သိရသည်။ FMUSER ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်မှုများအရောင်းရဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ RF ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်မှုများ တူညီသော အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များ ရှိသည်။
1. အမျိုးမျိုးသော Filter စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် OEM မှကြိုဆိုပါတယ်။
ဇကာ၏ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းသည် အသံလွှင့်ကိရိယာထုတ်လုပ်သူ၏ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် အသံလွှင့်ကိရိယာများ၏ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော RF ဟာမိုနီစစ်ထုတ်စက်သည် ဘတ်ဂျက်စျေးနှုန်း၊ တာရှည်ခံမှု၏လက္ခဏာများ ရှိသင့်သည်။ FMUSER 20kW FM low-pass filter များသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန အော်ပရေတာများအတွက် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး စျေးနှုန်းသင့်တင့်ပါသည်။
2. အနည်းဆုံး 1 PCS ဒီဇိုင်းနှင့် စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိနိုင်သည်။
အနည်းဆုံး 1 pcs Filter အနည်းဆုံးအတွက် ဒီဇိုင်းနှင့် စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးထားသည်။ မတူညီသောရေဒီယိုအော်ပရေတာများသည်အမျိုးမျိုးသောရေဒီယိုစခန်းများ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကိုရင်ဆိုင်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်၊ RF စစ်ထုတ်သူသည်လွတ်လပ်စွာစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်ဖြစ်စေ filter များသည် filter ပေးသွင်းသူများ၏ထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ရန်စံနှုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ FMUSER သည် စစ်ထုတ်သူအများအပြားထံမှ ထင်ရှားရခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ RF စစ်ထုတ်မှုများသည် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်၊ ဘတ်ဂျက်စျေးနှုန်းနှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လိုသော အဆင့်မြင့်စစ်ထုတ်မှုမည်မျှပင်ရှိပါစေ FMUSER သည် သင့်အား အမြဲတမ်းဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။
3. FMUSER ထံမှ RF ဟာမိုနစ် စစ်ထုတ်ခြင်း လမ်းညွှန်ချက်
ဘယ်လိုရွေးမလဲ ထိပ်တန်း RF ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်မှုများ 2021 ခုနှစ်အတွင်း ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူများကြားတွင် FMUSER ဖောက်သည်အသစ်နှင့် အဟောင်းများစွာအတွက် တွန်းအားပေးသည့် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာအဖွဲ့ကို လေ့လာပြီးနောက်၊ အချို့သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကန့်သတ်ချက်များသည် သင့်အား ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရာတွင်လည်း ကူညီပေးနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ဟာမိုနီစစ်ထုတ်မှုကို ပေးစွမ်းရန် ရည်စူးထားပြီး ဂိမ်းများတွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် လိုအပ်ပါက၊ RF ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်စက်များ ရောင်းရန်ရှိသည်။ သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးပေါ် အချက်အလက် တစ်ခုခု လိုအပ်သည်။ harmonic filters စျေးနှုန်း FMUSER မှ ကျေးဇူးပြု၍ သိထားပါ။ WE အမြဲတမ်းနားထောင်နေတယ်!
Pim နိမ့်လေလေ အချက်ပြများ အားကောင်းလေဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ PIM (AKA: Passive Intermodulation)၊ PIM သည် linear မဟုတ်သော passive စက်ပစ္စည်းများတွင် ကြိမ်နှုန်းနှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ကြိမ်နှုန်းများ ရောနှောခြင်းဖြင့် ထုတ်ပေးသော အသုံးမကျသော အချက်ပြမှုများ၏ ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိပါသည်။ ဤအချက်ပြမှုအသစ်များသည် ကြိုးမဲ့စနစ်နှစ်ခုကြားမှ ထုတ်လွှင့်သော မူရင်းအချက်ပြမှုများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ ၎င်းသည် မည်သည့်ကြိုးမဲ့စနစ်တွင်မဆို အချက်ပြနှောင့်ယှက်မှုကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ Low PIM ဆိုသည်မှာ သုံးစွဲသူများ အတွက် bandwidth ပိုများသော ခိုင်မာသော အချက်ပြမှုတစ်ခု ရှိခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ သုံးစွဲသူများ စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် အော်ပရေတာများအတွက် ဝင်ငွေပိုများသည်။
Insertion Loss နည်းပါးပြီး Return Loss လိုအပ်ပါသည်။
ထည့်သွင်းခြင်းဆုံးရှုံးမှုနှင့် ပြန်ကျခြင်းတို့သည် RF စစ်ထုတ်မှုများ၊ RF ပါဝါပိုင်းခြားခြင်းနှင့် RF အသံချဲ့စက်များကဲ့သို့သော ကြိမ်နှုန်းမြင့်စက်ပစ္စည်းများ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဂီယာအမျိုးအစားအားလုံး (ဒေတာပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ထုတ်လွှင့်ခြင်း) တို့တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သွယ်တန်းထားသော လိုင်းများ သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းအားလုံးနီးပါးအတွက် ၎င်းသည် မှန်သောကြောင့်၊ လမ်းကြောင်းပိုရှည်လေ၊ ဆုံးရှုံးမှုပိုများလေဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အဆစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ အပါအဝင် လိုင်းတစ်လျှောက် ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်တစ်ခုစီတွင်လည်း အဆိုပါဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်သည်။ RF စစ်ထုတ်မှုများကဲ့သို့သော ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော တပ်ဆင်မှုအတွက်၊ ထည့်သွင်းမှုနည်းသော ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အခြားဆွဲဆောင်မှုရှိသော အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည့် Filter များသည် ရေဒီယိုအော်ပရေတာများအတွက် ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာလေ့ရှိသည်။
အဲဒါက မင်းမြင်တာထက် အများကြီးပိုတယ်။
Insertion loss ထက် အရေးကြီးသော ကိုးကားချက်များ ရှိသည်၊ ပူးတွဲတန်ဖိုးနှင့် ပါဝါမြင့်မားသော ကိုင်တွယ်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြား ကန့်သတ်ချက်များ စသည်တို့သည် ကောင်းမွန်သော RF ဟာမိုနီစစ်ထုတ်စက်ကို ဝယ်ယူသည့်အခါ အရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်သည်။ RF harmonics filter များအကြောင်း အခမဲ့ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာအဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် သေချာစေပါ၊ ၎င်းတို့သည် သင့်သတင်းကောင်းကို 7/24 အွန်လိုင်းတွင် စောင့်မျှော်နေပါသည်။ FMSUER နည်းပညာအဖွဲ့မှ အကြံပြုချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
စျေးနှုန်းပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူ စစ်ထုတ်မှုအတိုင်းအတာကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် တယ်လီကွန်မြူနစ်စနစ်၊ IEEE 802 ကဲ့သို့သော ကျယ်ပြန့်သော ရေဒီယိုမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ကြိမ်နှုန်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်။
မြင့်မားသောပါဝါကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ attenuation တန်ဖိုး
FM Station Transmitter Harmonics ကို နှိမ်နှင်းခြင်းအတွက်- FM transmitter များသည် မကြာခဏ ဟာမိုနီများ ထုတ်လုပ်သည် - transmitter အကြိမ်ရေ၏ အဆများစွာ။ ယင်းတို့ထဲမှအချို့သည် VHF-TV နှင့် UHF-TV ဧည့်ခံခြင်းနှင့် စာပို့ခြင်းနှင့် ဆယ်လူလာရေဒီယိုလက်ခံခြင်းတို့ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ဤစီးရီး၏ low-pass filters များသည် FM band တစ်ခုလုံးကို ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးစွာဖြင့် ဖြတ်သန်းပြီး ကြီးမားသော ဟာမိုနီကို ဖိနှိပ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။
▲ အကောင်းဆုံး FM Harmonics Filter ကိုရွေးချယ်နည်း ▲
RF Filters များအကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်အလက်များနှင့် အမေးအဖြေများ
ယခင်အပိုင်းကတော့ အကောင်းဆုံး FM Harmonics Filter ကိုရွေးချယ်နည်း | ကြိုးခုန်
ပထမပိုင်းသို့ ပြန်သွားရန် အကောင်းဆုံး FM Low Pass Filter ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ | ကြိုးခုန်
RF filter ၏ circuit တည်ဆောက်ပုံ သို့မဟုတ် စျေးကွက်ဝေစုအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ FMUSER မှ passive electronics များအကြောင်း လေ့လာရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းအဖွဲ့ကို တိုက်ရိုက်မေးမြန်းရန် အကြံပြုပါသည်၊ အကြောင်းမှာ သင်ဖတ်ရှုထားသော အကြောင်းအရာသည် သင့်အား RF filter ကို လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြရန် မလုံလောက်သောကြောင့်၊ (PS- ဝီကီပီးဒီးယားတွင် ၎င်းကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ)။ ထို့ကြောင့်၊ သင့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သမျှမှာ RF စစ်ထုတ်မှုများ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အမျိုးအစားများနှင့် RF စစ်ထုတ်မှုများ မည်သို့လုပ်ဆောင်ပုံတို့ကို ရိုးရှင်းစွာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရှင်းပြရန်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်၊ FMUSER သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသံလွှင့်ဌာနဖောက်သည်များမှရရှိသော RF Filters များနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးခွန်းအချို့ကို စာရင်းပြုစုထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြေများဖြစ်သည်။ RF filter များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
Q1- RF Filters များသည် FM/TV Station မှလွဲ၍ အခြားနည်းလမ်းများကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ကြသနည်း။
RF Filters များသည် ကြိုးမဲ့နည်းပညာတွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်၊ RF စစ်ထုတ်မှုများကို ရေဒီယိုလက်ခံကိရိယာများဖြင့် အသုံးပြုထားသောကြောင့် အခြားသော မလိုလားအပ်သော လှိုင်းနှုန်းများကို စစ်ထုတ်နေစဉ် မှန်ကန်သော ကြိမ်နှုန်းများကိုသာ ဖျော်ဖြေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ RF စစ်ထုတ်မှုများကို ၎င်းတို့သည် အလယ်အလတ်မှ အလွန်မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းများဖြစ်သည့် မီဂါဟတ်ဇ်နှင့် ဂစ်ဂါဟတ်ဇ်တို့တွင် အလွယ်တကူ လည်ပတ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်း၏ လည်ပတ်မှု အင်္ဂါရပ်ကြောင့် ၎င်းကို အသံလွှင့်ရေဒီယို၊ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား စသည်တို့ကဲ့သို့သော စက်ကိရိယာများတွင် အသုံးများဆုံးဖြစ်သည်။
RF စစ်ထုတ်သူများသည် ဆူညံသံများကို စစ်ထုတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၏ အရည်အသွေး သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ပြင်ပအချက်ပြမှုများ၏ အနှောင့်အယှက်များကို လျှော့ချနိုင်သည်။ သင့်လျော်သော RF စစ်ထုတ်မှုများမရှိခြင်းသည် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အချက်ပြကြိမ်နှုန်းများ လွှဲပြောင်းခြင်းအပေါ် ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
မှန်ကန်သော RF စစ်ထုတ်မှုများဖြင့်၊ အိမ်နီးချင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်မှ ထုတ်ပေးသော အချက်ပြပြတ်တောက်မှုများနှင့်အတူ ပြင်ပအနှောင့်အယှက်များကို အလွယ်တကူ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ၎င်းသည် မလိုလားအပ်သော အချက်ပြကြိမ်နှုန်းအားလုံးကို လွယ်ကူစွာ စစ်ထုတ်နေစဉ် လိုချင်သော အချက်ပြကြိမ်နှုန်းများ၏ အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် RF စစ်ထုတ်မှုများသည် ဂြိုလ်တု၊ ရေဒါ၊ မိုဘိုင်းကြိုးမဲ့စနစ်နှင့် အခြားအရာများဖြစ်သည့် ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ filter များသည် ပေါ့ပါးပြီး signal ၏ frequencies များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ RF စစ်ထုတ်မှုများသည် မျှော်လင့်ထားသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်နေသည့် အခြေအနေမျိုးတွင်၊ သင်သည် သင်၏ ဒီဇိုင်းအတွက် အသံချဲ့စက်တစ်ခု ပေါင်းထည့်ထားသည့် အခြားရွေးချယ်မှု အမျိုးမျိုးကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ Trellisware အသံချဲ့စက်မှ အခြားသော RF ပါဝါအသံချဲ့စက်များထံ၊ သင်သည် အောက်အချက်ပြကြိမ်နှုန်းများကို ပိုမိုမြင့်မားသော အရာများသို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် RF ဒီဇိုင်းများ၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
ထို့အပြင်၊ RF filter များသည် ဆဲလ်ဖုန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ မိုဘိုင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ၎င်းတို့သည် မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ရန် တီးဝိုင်းပမာဏအချို့ လိုအပ်သည်။ သင့်လျော်သော RF စစ်ထုတ်မှု မရှိသဖြင့်၊ အမျိုးမျိုးသော တီးဝိုင်းများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း တည်ရှိခွင့် မပြုတော့ဘဲ၊ ဆိုလိုသည်မှာ အချို့သော တီးဝိုင်းများကို ပယ်ချမည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ Global Navigation Satellite System (GNSS)၊ အများသူငှာ ဘေးကင်းရေး၊ Wi-Fi နှင့် အခြားအရာများ။ ဤတွင်၊ RF စစ်ထုတ်မှုများသည် တီးဝိုင်းအားလုံးကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အတူတကွတည်ရှိခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။
FMUSER ၏ ရင့်ကျက်သော R&D ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် မတူညီသော filter များစွာကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်အသံလွှင့်ဌာနအတွက် မည်သည့်အရာများသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း မသေချာပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းနှင့် နည်းပညာအဖွဲ့သည် စောင့်မျှော်နေပါမည်။ နားရွက်အားလုံးနှင့်။
Q2- RF Filter ကို ဘယ်လိုဖန်တီးပါသလဲ။
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ RF စစ်ထုတ်မှုများကို တွဲဆက်ထားသော resonators များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး capacitors၊ inductors နှင့် (မကြာခဏနည်းသော) RF ထရန်စဖော်မာများကဲ့သို့သော passive reactive အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ Filter များသည် အများအားဖြင့် linear ဖြစ်ပြီး၊ ချဲ့ထွင်မှု တစ်မျိုးမျိုး လိုအပ်သောအခါတွင် ၎င်းတို့ကို RF transistors (bipolar သို့မဟုတ် field-effect) ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ထားသော RF amplifier များနှင့် တွဲသုံးနိုင်သည်။ ရေဒီယိုလှိုင်းခွင်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ မလိုလားအပ်သော အချက်ပြမှုများကို စစ်ထုတ်ရာတွင် Filters များ လိုအပ်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ၎င်း၏အရေးအကြီးဆုံးအသုံးပြုမှုသည် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းဒိုမိန်းအတွင်း ရောက်ရှိလာပါသည်။
low pass filter အတွက်၊ low pass frequency အစိတ်အပိုင်းများကိုသာခွင့်ပြုပြီး အခြားသော high frequency အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကို ပိတ်ဆို့သည့် ၎င်း၏ circuit ကို low pass filter ဟုခေါ်သည်။ LPF ဟူသောအမည်သည် low range frequency ကိုဖော်ပြသည်။
ကြိုးမဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ လျှောက်လွှာနှင့် အရွယ်အစားအပေါ်အခြေခံ၍ စစ်ထုတ်ခြင်းအမျိုးအစားများစွာရှိပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဝမ်းတွင်းစစ်ထုတ်စက်များ၊ အသွားလိုက်စစ်ထုတ်စက်များ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဇကာများ၊ ဒိုင်လျှပ်စစ်ဇကာများ၊
FMUSER သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ RF ဟာမိုနီ စစ်ထုတ်မှုများ. ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသံလွှင့်ကိရိယာ အသိပညာ အရံနှင့် နည်းပညာအရှိဆုံး အဖွဲ့ရှိသည်။ ဤမျှဝေမှုကိုဖတ်ရှုစဉ်တွင် သင့်တွင် RF စစ်ထုတ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက၊ ပံ့ပိုးကူညီမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာအဖွဲ့အား မေးမြန်းရန် ကြိုဆိုပါသည်။
Q3- RF Filter အမျိုးအစား ဘယ်နှစ် မျိုးရှိသလဲ၊ အဲဒါတွေက ဘာတွေလဲ။
Radio Frequency filters များသည် မလိုလားအပ်သော အချက်ပြမှုများကို ပယ်ဖျက်နိုင်ချိန်တွင် မှန်ကန်သော အချက်ပြမှုများကို ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသည့် အထူးဆားကစ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ filter topology နှင့်ပတ်သက်လာသောအခါတွင် အခြေခံ RF filter အမျိုးအစား လေးမျိုးရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ high-pass; band-pass; နှင့် band-reject (သို့မဟုတ် notch filters)။ အသုံးအများဆုံး RF စစ်ထုတ်မှုများတွင် လှေကားဖွဲ့စည်းပုံပါရှိပြီး အစိတ်အပိုင်းများ (inductors နှင့် capacitors) ၏ "အနေအထား" သည် ၎င်းတို့၏ အမျိုးအစားကို သတ်မှတ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းများ၏ တန်ဖိုးများသည် ၎င်းတို့ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်းမပြုသည့် အချက်ပြကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးကို သတ်မှတ်သည်။
Low Pass Filter - Lowpass Filter - LPF
low pass filter သည် အခြား signal frequency တိုင်းကို တစ်ချိန်တည်းတွင်သာ ဖြတ်တောက်ရန် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်များကိုသာ ခွင့်ပြုသည်။ bandpass ကိုဖြတ်သွားသောအခါ signal ၏အကြိမ်ရေလျှော့ချမှုပမာဏကို filter topology၊ layout နှင့် components များ၏အရည်အသွေးစသည်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ ထို့အပြင် filter topology သည် filter မှမည်သို့လျင်မြန်စွာကူးပြောင်းမည်ကိုဆုံးဖြတ်သည် ၎င်း၏ အဆုံးစွန်သော ငြင်းပယ်ခြင်းကို ခံရစေရန်အတွက် ပတ်စ်ပတ်။
Low pass filter များသည် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် လာပါသည်။ ဤ filter ၏အဓိကအသုံးပြုမှုမှာ RF အသံချဲ့စက်၏ ဟာမိုနီများကို ဖိနှိပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသော ဂီယာကြိုးများနှင့် ပတ်သက်လာသောအခါ မလိုလားအပ်သော အနှောင့်အယှက်များကို တားဆီးနိုင်သောကြောင့် ဤလက္ခဏာသည် အရေးကြီးပါသည်။ အဓိကအားဖြင့်၊ low pass filter များကို အသံအပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုကြပြီး ပြင်ပဆားကစ်များမှ ဆူညံသံများကို စစ်ထုတ်သည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့် အချက်ပြမှုများကို စစ်ထုတ်ပြီးနောက် ရလဒ်အချက်ပြကြိမ်နှုန်းများသည် ပြတ်သားပြီး ကြည်လင်သော အရည်အသွေးကို ရရှိသည်။
High Pass Filter - Highpass Filter - HPF
low pass filter နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် high pass filter (HPF) သည် high-frequency signal ကိုသာဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသည်။ အမှန်မှာ၊ high pass filters များသည် low pass filter များနှင့် အတော်လေး လိုက်ဖက်ညီပြီး ၎င်းတို့နှစ်ခုလုံးကို bandpass filter တစ်ခုထုတ်လုပ်ရန် ၎င်းတို့ကို တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ high pass filter ၏ ဒီဇိုင်းသည် ရိုးရှင်းပြီး threshold point ထက်နိမ့်သော ကြိမ်နှုန်းများကို လျှော့ပေးသည်။
အများအားဖြင့်၊ ကြိမ်နှုန်းနိမ့်သော ကြိမ်နှုန်းအားလုံးကို စစ်ထုတ်သည့် အသံစနစ်များတွင် high pass filter များကို အသုံးပြုပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းကို စပီကာငယ်များတွင် ဘေ့စ်ဖယ်ရှားရန်နှင့် များစွာသောကိစ္စများတွင် အသုံးပြုသည်။ ဤစစ်ထုတ်မှုများကို စပီကာများတွင် သီးသန့်တည်ဆောက်ထားသည်။ သို့သော်၊ မည်သည့် DIY ပရောဂျက်နှင့်မဆို ကြုံလာပါက၊ high pass filters များကို စနစ်ထဲသို့ အလွယ်တကူ ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
Band Pass Filter - Bandpass Filter - BPF
Bandpass filter (BPF) သည် မတူညီသော ကြိမ်နှုန်းနှစ်ခုမှ အချက်ပြမှုများကို ဖြတ်သန်းရန်နှင့် ၎င်း၏လက်ခံမှုအကွာအဝေးအတွင်း မရောက်နိုင်သော အချက်ပြမှုများကို လျှော့ချပေးသည့် ဆားကစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Bandpass စစ်ထုတ်ခြင်းအများစုသည် ပြင်ပပါဝါရင်းမြစ်ပေါ်တွင်မူတည်ပြီး ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များနှင့် ထရန်စစ္စတာများဖြစ်သည့် တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုသည်။ ထိုသို့သော filter အမျိုးအစားများကို active bandpass filters ဟုခေါ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အချို့သော band pass filter များသည် ပြင်ပပါဝါရင်းမြစ်ကို အသုံးမပြုဘဲ inductors နှင့် capacitors များဖြစ်သည့် passive components များအပေါ်တွင် ကြီးကြီးမားမား အားကိုးပါသည်။ ဤစစ်ထုတ်မှုများကို passive bandpass filters ဟုခေါ်သည်။
Band Pass Filter များကို ကြိုးမဲ့လက်ခံကိရိယာများနှင့် transmitter များတွင် အသုံးများသည်။ Transmitter တွင် ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ output signal ၏ bandwidth ကို အနိမ့်ဆုံးကန့်သတ်ထားရန်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သော data များကို အလိုရှိသောအမြန်နှုန်းနှင့် ပုံစံဖြင့် ပို့ဆောင်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ လက်ခံသူထံ ရောက်ရှိလာသောအခါ၊ band pass filter သည် မလိုလားအပ်သော ကြိမ်နှုန်းများမှ ဝင်လာသော အခြားအချက်ပြမှုများကို ဖြတ်တောက်နေစဉ်တွင် နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော ကြိမ်နှုန်းများကို ကုဒ်နံပါတ် သို့မဟုတ် ကြားနိုင်စေရန်သာ ခွင့်ပြုပါသည်။
အားလုံးကိုခြုံကြည့်လျှင် bandpass filter ကို ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းဆွဲထားသောအခါ၊ ၎င်းသည် signals များ၏ အရည်အသွေးကို အလွယ်တကူ တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ၎င်းသည် signals များကြားတွင် ပြိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်များကို လျှော့ချနိုင်သည်။
Band Reject Filter - Band Stop Filter - Reject Filter - BSF
တစ်ခါတစ်ရံတွင် band stop filter (BSF) ဟုလူသိများသော band reject သည် frequencies အများစုကို မပြောင်းလဲဘဲ ဖြတ်သန်းနိုင်စေမည့် filter တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းသည် အလွန်တိကျသောအကွာအဝေးအောက် ကျရောက်သော ကြိမ်နှုန်းများကို လျော့စေသည်။ ၎င်းသည် bandpass filter ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံဖြင့်အတိအကျလုပ်ဆောင်သည်။
အခြေခံအားဖြင့်၊ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် သုညမှ ကြိမ်နှုန်း၏ ပထမဆုံးဖြတ်တောက်သည့်အမှတ်သို့ ကြိမ်နှုန်းများကိုဖြတ်သန်းရန်ဖြစ်သည်။ ကြားတွင်၊ ၎င်းသည် ကြိမ်နှုန်း၏ ဒုတိယဖြတ်တောက်မှုအမှတ်အထက်ရှိ ကြိမ်နှုန်းအားလုံးကို ဖြတ်သန်းသည်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းသည် ဤအချက်နှစ်ခုကြားရှိ အခြားသော ကြိမ်နှုန်းအားလုံးကို ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့သည်။
အားလုံးကိုခြုံကြည့်လျှင် filter သည် passband ၏အကူအညီဖြင့်အချက်ပြမှုများကိုဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသည့်အရာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ filter ရှိ stopband သည် filter တစ်ခုခုမှအချို့သောကြိမ်နှုန်းများကိုပယ်ချသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ high pass၊ low pass သို့မဟုတ် bandpass ဖြစ်ပါစေ၊ အကောင်းဆုံး filter သည် passband တွင် ဆုံးရှုံးမှုမရှိပေ။ သို့သော်၊ လက်တွေ့တွင်၊ bandpass သည် ကြိမ်နှုန်းဆုံးရှုံးမှုအချို့နှင့် ရပ်တန့်သွားသည့်အခါ အကန့်အသတ်မရှိ ငြင်းပယ်ခြင်းကို မရရှိနိုင်သောကြောင့် စံပြစစ်ထုတ်ခြင်းကဲ့သို့ မည်သည့်အရာမျှ မရှိပါ။
▲ RF Filters များအကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များ ▲
20kW FM Low Pass Filter x 1PCS
20kW FM Low Pass Filter အကြောင်း သင်သိထားရမည့်အရာ
FMUSER 20kW Low Pass Filter ၏ လျှပ်စစ်အညွှန်းကိန်း (ကိုးကားရန်သာ)
နောက်အပိုင်းကတော့ FMUSER 20kW Low Pass Filter ၏ လျှပ်စစ်အညွှန်း | ကြိုးခုန်
Geez၊ မင်းသတိထားရမယ့်အရာတွေက အများကြီးဘဲ။ သို့သော်၊ ရေဒီယိုအော်ပရေတာတစ်ဦးအနေဖြင့်၊ သင်သည် FMUSER ထက် သေချာပေါက်သိသည်၊ သို့သော် ဤနေရာတွင်၊ သင်၏ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်ကိရိယာများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်၊ ဤ 20kW FM low pass filter ကို သင်ဝယ်ယူပြီးနောက် သင့်အတွက် အကြံပြုချက်သုံးခုကို တင်ပြရန် လိုအပ်နေသေးပါသည်။ သင်သိလိုသည့်အချက်သုံးချက်- လည်ပတ်မှု၊ တပ်ဆင်မှု၊ နှင့် ကေဘယ်တီဗီ။
1. RF Filter ၏လုပ်ဆောင်ချက်
ဤ low pass filter သည် FM transmitter များအတွင်း ဖန်တီးထားသော သဟဇာတစွမ်းအင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရုပ်မြင်သံကြား အနှောင့်အယှက်များကို လျှော့ချရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
Filter သည် bi-directional ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ 20kW FM transmitter filter model A သည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တုံ့ပြန်မှုမျဉ်းကွေးတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း 140 MHz အထက် ကြိမ်နှုန်းများကို လျော့ချပေးပါသည်။
အသိပေးစာ: 20kW filter အတွက် input signal သည် 20000 watts ထက်မပိုသင့်ပါ။ ပိုမိုမြင့်မားသောပါဝါကိုအသုံးပြုပါက filter ကိုအမြဲတမ်းပျက်စီးစေပြီးအာမခံကိုပျက်ပြယ်စေလိမ့်မည်။
2. RF Filter တပ်ဆင်ခြင်း။
လက်တွေ့ဆန်သည့်အတိုင်း transmitter ၏ output အနီးတွင် filter ကို တပ်ဆင်သင့်သည်။
အစွန်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိ အထီးချိတ်ဆက်ကိရိယာများဖြင့်31/8" EIA ချိတ်ဆက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်း။
သတိ: Filter သည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပူလာတတ်သည်၊ ၎င်းသည် အပူပုံစံဖြင့် သဟဇာတစွမ်းအင်ကို ဖြုန်းတီးခြင်းဖြင့် ၎င်းသည် ၎င်း၏အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။
3. သင့်ရပ်ကွက်အတွင်း ကေဘယ်လ်တီဗီမှ တိုင်ကြားချက်
သင်၏ထုတ်လွှင့်မှုသည် ကေဘယ်တီဗီစနစ်အား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါက low pass filter ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အချို့သောကေဘယ်ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏စနစ်တွင် FM လိုင်းများမသယ်ဆောင်ဘဲ FM ထုတ်လွှင့်မှုလှိုင်းတွင် တီဗီချန်နယ်များကို ထားရှိနိုင်သည်။ ဤသို့ဆိုလျှင်၊ သင်၏ အခြေခံ ကြိမ်နှုန်း (ကယ်ရီယာ) သည် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပြီး စစ်ထုတ်မှု ထိရောက်မှု မရှိနိုင်ပါ။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် သင့်ဒေသခံကေဘယ်လ်ကုမ္ပဏီကို ဆက်သွယ်ပါ။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ ကေဘယ်ကုမ္ပဏီသည် ဟောင်းနေသော သို့မဟုတ် ဟောင်းနွမ်းနေသောကေဘယ်ကြိုးကို အစားထိုးခြင်းဖြင့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး ကြေးနီနှင့် ငွေရောင် ကြေးဝါပစ္စည်းများ အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံကို ကတိပြုပါသည်။
FM Band တစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံမှု
အကြမ်းခံသော တွဲချိတ်များ ရရှိနိုင်သည်။
အလွန်နည်းသော ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှုနှင့် VSWR
ထုတ်လွှင့်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ကွဲပြားသော ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
မတူညီသော ပါဝါအဆင့်များသည် အခြေအနေများစွာ၏ လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝ ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
ထည့်သွင်းဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးသော စက်မှုထိပ်တန်းအဆင့်နှင့် VSWR သည် အသံလွှင့်ဌာနအတွက် ထုတ်လွှင့်မှုအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
2nd နှင့် 3rd harmonic တွင် attenuation မြင့်မားသောကြောင့် output အတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
သင်အလိုရှိသောအရာကိုပြောပါ၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါသည်။
10th Harmonic မှတဆင့် မြင့်မားသော ငြင်းပယ်မှု
× 85 95 965 မီလီမီတာ×
× 85 95 495 မီလီမီတာ×
~ 8 ကီလိုဂရမ်
~ 4.4 ကီလိုဂရမ်
1. ဟာမိုနီနှင့် spurious emissions နောက်ကွယ်မှ အကြောင်းရင်းများ
အပျော်တမ်း ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းသည် ပါဝါမြင့်မားသော ဟာမိုနီများ၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အခြားသော အနီးနားရှိ စက်ကိရိယာများ၏ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုကိုလည်း ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။
အသံချဲ့စက်များသည် ဟာမိုနီများကို ထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းတို့သည် အချက်ပြလှိုင်းပုံစံကို ပုံပျက်စေလိမ့်မည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လိုင်းမဆန်ပါ။ ညံ့ဖျင်းသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန ဒီဇိုင်းသည် ဟာမိုနီအဆင့်ကို တိုးစေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကောင်းမွန်သော ပလပ်ဖောင်းဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုရုံဖြင့် အနှောင့်အယှက်များကို လျှော့ချနိုင်သည်။
စက်ပစ္စည်းသည် တက်ကြွစွာ မထုတ်လွှတ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ပြင်းထန်သော ဓာတ်ငွေ့များကို ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ မြန်နှုန်းမြင့် အချက်ပြမှုများ၊ ဆူညံသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုများ သို့မဟုတ် အခြားသော အချက်ပြပြဿနာများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ စက်ပစ္စည်းသည် တက်ကြွစွာ ထုတ်လွှင့်နေပါက၊ အကြောင်းအရင်း နှစ်ခုကြောင့် spurious emission ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်-
ရေဒီယိုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပါဝါကြိုးတွင် ကြိမ်နှုန်းမြင့် ဆူညံသံများ ပါရှိသည်။ ၎င်းသည် ရေဒီယို၏ ပါဝါအသံချဲ့စက်အား အချို့သော ကြိမ်နှုန်းများကို ထုတ်ပေးစေသည်။
PCB ရှိ အစိတ်အပိုင်းအချို့သည် အခြေခံကြိမ်နှုန်းကို ကောက်ယူသည်။
အသိပေးစာ: မှန်ကန်သော bandwidth သို့မဟုတ် mode ကိုအသုံးပြုထားသော transmitter သည် မှန်ကန်သော bandwidth သို့မဟုတ် mode အပြင်ဘက်တွင် လွဲမှားစွာ ထုတ်လွှင့်ပါက Spurious transmission ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ transmitter သည် frequency band အနီးရှိ ကြိမ်နှုန်းများနှင့် ညှိထားသော အခြား station များကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
2. Harmonics နှင့် Spurious Emission တို့၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မည်သို့လျှော့ချမည်နည်း။
နှောင့်ယှက်မှုအဆင့်ကို ထိန်းချုပ်ရန် အောက်ပါအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်-
off-frequency spurious emission ကိုလျှော့ချရန် transmitter ကိုစစ်ဆေးပါ။
ဆူညံသောပစ္စည်းများနှင့် တပ်ဆင်မှုများကို အင်တင်နာနှင့် ဝေးကွာကြောင်း သေချာပါစေ။
လုပ်ဆောင်ချက် ညံ့ဖျင်းသော အပျော်တမ်း ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်များ အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အသိပေးစာ: သဟဇာတနှင့် ဆူညံထုတ်လွှတ်မှုကို ရှောင်လွှဲ၍မရသော်လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လျှော့ချနိုင်သည်။ transmitter ၏သတ်မှတ်ထားသောချန်နယ်အပြင်ဘက်ရှိ သဟဇာတအချက်ပြမှုမှန်သမျှကို spurious transmission အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် စက်ကိရိယာများ လည်ပတ်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် အနှောင့်အယှက်များကြောင့် ဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါသည် ရေဒီယိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဟူသည်နှင့် ရေဒီယိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၏သက်ရောက်မှုကို မည်ကဲ့သို့လျှော့ချရမည်ကို မျှဝေထားသော နောက်ထပ်ရေဒီယိုအသိပညာမျှဝေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ RF စစ်ထုတ်မှုများတွင် ယခင်က လုံလောက်သော အချက်အလက်ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သော်လည်း အချို့သော ရေဒီယိုအချက်ပြထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ဧည့်ခံခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများသည် လက်တွေ့ဘဝတွင် ရှိနေသေးသည်။ ရေဒီယိုနယ်ပယ်ရှိ ဖောက်သည်အများအပြားသည် ရေဒီယိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအပေါ် ခါးခါးသီးသီး တံတွေးထွေးပြီး ၎င်းတို့အတွက် အထူးဖြေရှင်းနည်းများကို ရေးဆွဲပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်ရှိသော ရာနှင့်ချီသော စကားလုံးများတွင် ရေဒီယိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဆိုင်ရာ လက်တွေ့ကျသော ဗဟုသုတအချို့ကို အတိုချုံးဖော်ပြပါမည်။
1. ရေဒီယိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကြောင့် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို ထိခိုက်နိုင်သနည်း။
ရေဒီယိုနှင့် ရေဒီယိုမဟုတ်သော စက်ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးသည် ရေဒီယိုအချက်ပြမှုများကြောင့် ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်သည်။ ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းများတွင် AM နှင့် FM ရေဒီယိုများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားများ၊ ကြိုးမဲ့တယ်လီဖုန်းများနှင့် ကြိုးမဲ့အင်တာကွန်များ ပါဝင်သည်။ ရေဒီယိုမဟုတ်သော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် စတီရီယိုအသံစနစ်များ၊ ကြိုးတပ်တယ်လီဖုန်းများနှင့် ပုံမှန်ကြိုးတပ်ထားသော အင်တာကွန်များ ပါဝင်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများအားလုံးသည် ရေဒီယိုအချက်ပြမှုများကြောင့် နှောင့်ယှက်နိုင်သည်။
2. ရေဒီယို နှောက်ယှက်ခြင်းကို အဘယ်အရာက ဖြစ်စေနိုင်သနည်း။
ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်များနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အနီးကပ်အကွာအဝေးအတွင်း လုပ်ဆောင်သည့်အခါတွင် အနှောင့်အယှက်များ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်-
အနီးနားရှိ အသံလွှင့်စက်မှ ပြင်းထန်သော ရေဒီယိုအချက်ပြမှု၊
ထုတ်လွှင့်စက်မှ ထုတ်ပေးသော မလိုလားအပ်သော အချက်ပြမှုများ (spurious radiation ဟုခေါ်သည်)၊ နှင့်
မလိုလားအပ်သော အချက်ပြမှုများကို ဖမ်းယူခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် အကာအရံများ သို့မဟုတ် စစ်ထုတ်ခြင်း မလုံလောက်ပါ။
အနှောင့်အယှက်ပြဿနာများ မဖြစ်ပွားမီ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် ကြိုးစားပါ။ အင်တာနာများနှင့် တာဝါတိုင်တည်ဆောက်မှုများအတွက် မည်ကဲ့သို့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သက်ရောက်သည်ကို သိရှိရန် စည်ပင်သာယာရေးအာဏာပိုင်များနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ စည်ပင်သာယာရေး လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော တပ်ဆင်မှု အစီအစဉ်တစ်ခု ရှိလျှင် သင့်အိမ်နီးနားချင်းများနှင့် စကားပြောပါ။ သင်ဘာလုပ်ချင်သလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ရှင်းပြပါ။ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမဖြစ်အောင် အစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့အား အာမခံပါ။ GRS နှင့် အပျော်တမ်း ရေဒီယိုအော်ပရေတာများသည် အရေးပေါ်အခြေအနေများနှင့် ကြီးမားသောလူထုပွဲများအတွင်း ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကို ကူညီခြင်းဖြင့် အရေးကြီးသော ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြောင်း ၎င်းတို့အား သတိပေးပါ။
သင့်စက်ပစ္စည်းကို မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန၏ အင်တင်နာသည် အနီးနားရှိအိမ်များနှင့် တတ်နိုင်သမျှ ဝေးဝေးနေပြီး ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့် ဝေးနေသင့်သည်။ သင့်ရေဒီယိုစခန်းကို ထည့်သွင်းခြင်း အပိုင်းကို သေချာဖတ်ပါ။
သင့်ဘူတာရုံကို သင့်အိမ်နီးနားချင်းများနှင့် စိတ်ထဲထားလုပ်ဆောင်ပါ။ လုံလောက်သော ဆက်သွယ်ရေးအတွက် လိုအပ်သော အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ ဖြစ်နိုင်လျှင် ထုတ်လွှင့်ပါဝါကို ကန့်သတ်ပါ။ ထုတ်လွှင့်သည့် GRS ဘူတာများအတွက်၊ ပါဝါအသံချဲ့စက်များကို ခွင့်မပြုပါက၊ အင်တင်နာသို့ အမြင့်ဆုံးအထွက်အား4watts ထက် မပိုသင့်ပါ။ (single sideband; 12watts peak)။
သင်၏စက်ပစ္စည်းများကို ၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာပါစေ။ အခါအားလျော်စွာ၊ ထုတ်လွှင့်သည့်အကြိမ်ရေသည် မှန်ကန်ကြောင်း၊ လှိုင်းနှုန်းသည် လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များအတွင်းရှိနေကြောင်း၊ ဘူတာရုံ၏ကေဘယ်ကြိုးများ၊ အင်တင်နာနှင့် မြေပြင်စနစ်တို့သည် အခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်း သင်စစ်ဆေးသင့်သည်။
ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို သတိထားကာ ၎င်းတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားပါ။
ပြဿနာဖြစ်စေသည့်အရာကို ရှာဖွေရန်နှင့် ၎င်းကို ပိုကောင်းစေမည့်အရာများကို ရှာဖွေရန် သင့်အိမ်နီးချင်းများနှင့် လုပ်ဆောင်ပါ။
အနှောင့်အယှက်များအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ကို သင်ရှာဖွေနေချိန်တွင်၊ သင်၏ transmitter ပါဝါနှင့် လည်ပတ်ချိန်များကို ကန့်သတ်ပါ။ ပြဿနာမပြေလည်မချင်း သင့်ဘူတာရုံကို လုံးဝပိတ်ရန် စဉ်းစားပါ။
သင်သည် နောက်ထပ် ပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပါက ကျွန်ုပ်တို့အား လွတ်လပ်စွာ မေးမြန်းပါ။